Archive du 20190828
Demokrasia sy tany tan-dalàna Mandrisika hatrany ny Amerikanina
Tonga nanome voninahitra ny filohan'ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, ny masoivohon'i Etazonia Michael Pelletier omaly tetsy amin'ny lapan'Anosikely.
Ady amin’ny hosoka sy hala-bato Mitohy ny fitetezam-paritry ny HOM2HF
Mitety faritra ankehitriny ny Hetsiky ny olompirenena miady amin’ny hala-bato sy ny hoso-pifidianana na ny HOM2HF.
Ben’ny tanànan’i Didy Haratsiana sy sakanana tsy ho kandida…
Misy ambadika politika ! Mandeha ny karazana fanaratsiana ny ben’ny tanànan’i Didy, ao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro.
Lehiben’ny mpanohitra "Tokony ho afaka mirotsaka ho ben'ny tanàna
Marefo ny fanaovana politika eto amintsika ka sakana mipetraka ho an'ireo kandidà", hoy i Toavina Ralambomahay, mpanao politika sy mpanao gazety.
Fanoherana eto Madagasikara “Ho maodely ara-politika ny TIM”
Mihantona tanteraka ny fanoherana amin'izao ary miandry ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fanoherana.
Vahoaka malagasy « Mila manao politika ! »
Manoloana ny resaka roritina mikasika ny fifidianana filohan’ny federasionina malagasin’ny baolina kitra farany teo izay hita ho lasa hampifangaroan’ireo mpamakafaka sy mpiady hevitra azy
Fitondrana TGV Mihisatra ny fampanantenana
Misy mpanolotsaina ve ny fitondrana fa toa tsy misy mahafantatra ny fe-potoana hahavitana asa ireo tompon’andraikitra.
Andry Rajoelina any Japon “Andao hiadiana ny tsy fanjarian-tsakafo…”
Tanterahina any Yokohoma manomboka anio 28-30 aogositra ny fihaonam-be iraisam-pirenen’i Tokyo momba ny fampandrosoana an’i Afrika andiany faha-7 na ny “TICAD 7”, ka mandray anjara amin’izany i Madagasikara amin’ny alalan’ny delegasionina tarihin’ny filoham-pirenena Rajoelina.
Andro ho an’ny tanora maneran-tany Nankalaza an’izany ny Faritra Matsiatra Ambony
Ny 23 sy 24 aogositra lasa teo no nankalazana ny andro ho an’ny Tanora maneran-tany teo anivon’ny Faritra Matsiatra ambony.
Edito Miandry fandaminana matotra
Hatramin’izao dia tsy mbola miainga foana ny IEM raha ny hevitra sy mason’ireo mpanara-baovao sy ny mpandinika raharaham-pirenena no haravina.
Fidiran’ny mpianatra Manao tolotra fampindramam-bola ny BNI
Efa tadifitra tanteraka ao anatin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra ireo ray aman-dreny isan-tsokajiny ankehitriny.
CEG ANOSIBE Mpiadina CEPE miisa 95 tsy tonga
Nahatratra 95, omaly ireo mpiadina voasoratra anarana tsy tonga nanatrika ny fanadinana CEPE ho an’ny CEG Anosibe, fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra.
LISEA ARCADE Hanokatra oniversite lehibe
Ela ny ela fa tonga amin’ny tanjona niriany hanampy ireo tanora Malagasy hiakatra eny amin’ny anjerimanontolo ny lisea Arcade, tarihin-dRatoejanahary Bruno.
Zaza nisy nanala ny masony Notolorana seza misy kodiarana
Tonga nitsidika ilay zazalahikely vao telo taona monja sembana ara-batana monina ao Ankililaoka, distrikan’i Toliara II ny talen’ny kabinetra sy ny talem-paritry ny minisiteran’ny mponina ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana, omaly.
Fananganana tanàna vaovao Roso hatrany ny dian’ny HAFARI
Roso hatrany ny dian’ny fikambanana Hafari Malagasy amin’ny fananganana tanana vaovao sy hanampiana ny mpiray tanindrazana amin’ny asa fihariana mahavelona.
Vehivavy sy ny fandraharahana Antoky ny fampandrosoana ara-toekarena
Tsy afa-misaraka intsony ny vehivavy sy ny fandraharahana, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny fanatontoloana izao.
Nanafika sy nitifitra mpiandry omby Olona 3 nidoboka am-ponja ao Ambatolampy
Manaraka fitsaboana ao Antsirabe ilay mpiandry omby voatifitra.
Fanendahana eny Ambodin’Isotry Roalahy nifanesy voasambotra
Halatra finday sy vola no nahatrarana ireo jiolahy roa. Ny faran’ny herinandro teo, roalahy no voasambotry ny polisy avy eo anivon’ny kaomisarian’ny boriborintany faha-4 etsy Isotry,
VAKY TRANO TENY ANOSIPATRANA Tovolahy efa nigadra voasambotra
Tovolahy 18 taona iray efa mpamerin-keloka, no mbola tra-tehaky ny polisy avy nangalatra.
Voapanga ho mpangalatra Nitsoaka sy nisitrika tao an-tranon’olona
Roalahy nifampiampanga ho mpangalatra, nifamono avy any Ankadifotsy ary nihazo an’Andravoahangy.